Orbit Downloader ​ကို ​ဘယ်​လို ​အ​သုံး​ပြု​ရ​လဲ ?? ~ ညီနေမင်း ( နည်းပညာ )
Orbit Downloader ​ကို ​ဘယ်​လို ​အ​သုံး​ပြု​ရ​လဲ ??
​ကျွန်​တော် ​ဒီ​နေ့​တော့ Orbit Downloader ​နှင့် Program, Music ​နှင့် ​အ​ခြား File ​များ​ကို ​ဘယ်​လို Download ​လုပ်​ရ​လဲ​ဆို​တာ​ကို ​ရှင်း​ပြ​ပေး​ပါ့​မယ် .​အောက်​မှာ ​ဓါတ်​ပုံ​များ​နှင့် ​တစ်​ပုံ​ချင်း​စီ​ကို ​ရှင်း​ပြ​ထား​တာ ​ဖြစ်​တဲ့​အ​တွက် ​အား​လုံး​ပဲ ​ရှင်း​ကြ​လိမ့်​မယ်​လို့ ​မျှော်​လင့်​ပါ​တယ် .
Orbit Downloader ​ဆို​တာ​ဘာ​လဲ
​သူ​က Downloader ​တစ်​ခု​ပါ . Free ​ဖြစ်​သ​လို . ​သူ့​ရဲ့ Download speed ​ဟာ ​အ​တော်​လေး​ကို ​မြန်​ဆန်​တာ​ကြောင့် Downloader Tools ​များ​ထဲ​မှာ ​တစ်​ခြား​ငွေ​ကြေး​ပေး​ရ​တဲ့ Download Manager ​နှင့် ​ရင်​ဘောင်​တန်း​ပြီး​တော့ ​အ​တော်​အ​သင့် ​နေ​ရာ​ယူ​လာ​တဲ့ Downloader ​တစ်​ခု​ပါ.
​ဘယ်​လို Download ​လုပ်​ယူ​ရ​မ​လဲ
​ပ​ထ​မ​ဦး​ဆုံး http://orbitdownloader.com ​ကို ​သွား​ပါ
. ​ဆို​တဲ့ icon ​လေး​ကို ​နှိပ်​ပေး​လိုက်​ပါ။ ​ဒု​တိ​ယ​အ​ကြိမ်​ထပ်​ပြီး​တော့ ​ကို ​နှိပ်​ပါ။
​ကဲ​ပြီး​ပြီ​ဆို​ရင်​တော့ http://download.cnet.com ​ဆိုက်​မှာ uploading ​တင်​ထား​တဲ့ Orbitdownlaoder ​ဆီ​ကို ​ရောက်​သွား​မှာ​ပါ . (​စ​ကား​မ​စပ် ​ပြော​ပြ​ပါ​ဦး​မယ် http://download.cnet.com ​ဆိုက်​ဟာ microsoft company ​က​နေ ​အ​ခ​မဲ့ Free ware ​များ​ကို Download ​လုပ်​လို့​ရ​အောင် ​အ​ခ​မဲ့ uploading ​တင်​ပေး​ထား​တဲ့ ​ဆိုက်​တစ်​ခု​ပါ . ​အ​တော်​လေး​ကို ​စုံ​တဲ့ ​ဝဘ်​ဆိုက်​တစ်​ခု​ပါ.) ​အဲ့​မှာ​တင်​ထား​တဲ့ Download Now ​ဆို​တဲ့ ​နေ​ရာ​ကို click ​နှိပ်​လိုက်​ပါ။
​ပြီး​သွား​ပြီ​ဆို​ရင်​တော့ Download ​လုပ်​ဖို့ link ​လေး ​တစ်​ခု ​ကျ​လာ​ပါ​လိမ့်​မယ် . Download ​လုပ်​လိုက်​ပါ ။
​အ​ကယ်​၍ Download link ​မ​ကျ​လာ​ပါ​က ​အ​ခု​လို click here ​ဆို​တဲ့​နေ​ရာ​ကို ​နှိပ်​ပြီး​တော့​လဲ Download ​လုပ်​ယူ​လို့ ​ရ​ပါ​တယ် ။
​အား​လုံး​ပြီး​သွား​ရင်​တော့ ​ရ​လာ​တဲ့ orbit Downloader ​ကို Install ​လုပ်​လိုက်​ပါ။
​လုပ်​ပုံ​လုပ်​နည်း​ကို​ပါ ​အောက်​မှာ ​တစ်​ပုံ​ချင်း​စီ ​ပြ​ပေး​ထား​ပါ​တယ် . ​ရှင်း​မယ်​လို့ ​မျှော်​လင့်​ပါ​တယ် .
​ကဲ ​အ​ပေါ်​က​အ​တိုင်း install ​လုပ်​ပြီး​သွား​ရင်​တော့ ​ဒီ​ကို ​သွား​လိုက်​ပါ။
​ကဲ​ပြီး​ရင်​တော့ ​ဆို​တဲ့ icon ​လေး​ကို ​က​လစ်​နှိပ်​ပါ။
​ပြီး​ရင်​တော့ ​အ​ခု​လို box ​လေး​ကျ​လာ​ရင် install now ​ကို ​နှိပ်​ပြီး install ​လုပ်​လိုက်​ပါ။ ​အား​လုံး​ပြီး​သွား​ရင် firefox ​ကို restart ​လုပ်​မှာ​လား ​မေး​ပါ​လိမ့်​မယ် ။ OK ​ပေး​လိုက်​ပါ။ Firefox ​နောက်​တစ်​ကြိမ် ​ပြန်​ပွင့်​လာ​တာ​နှင့် ​ကျွန်​တော်​တို့ ​လို​ချင်​တာ​ကို Download ​လုပ်​လို့ ​ရ​သွား​ပါ​ပြီ။ ​အား​လုံး​ပဲ ​အ​ဆင်​ပြေ​ကြ ​ပါ​စေ​ဗျာ။
​ဒါ​က​တော့ ​လွယ်​ပါ​တယ် ​ဒီ​မှာ Download ​လုပ်​နည်း​များ ​အ​ကြောင်း​ကို ​ရေး​ခဲ့​ပြီး​သား​ပါ . ​အ​ပေါ်​က​အ​တိုင်း​သာ ​လုပ်​ထာ​မယ်​ဆို​ရင် ​အ​ခု Download ​လုပ်​နည်း​များ ​အ​တိုင်း Download ​လုပ်​ကြည့်​လိုက်​ပါ. ​အ​ရင်​က Save ​ဆို​တဲ့ box ​တစ်​ခု​ပေါ်​လာ​တဲ့​နေ​ရာ​မှာ orbitdownlaoder ​တစ်​ခု​ပို​လာ​တာ​ကို ​တွေ့​ရ​မှာ​ပါ။
B. February 12, 2010 at 1:12 PM
​ကို ​ညီ​နေ​မင်း ​ဒီ​ပို့စ်​က ​ခေါင်း​စဉ်​နဲ့ ​ရေး​ထား​တဲ့ ​အ​ကြောင်း​အ​ရာ​နဲ့ ​နည်း​နည်း ​ကွဲ​နေ​သ​လို​ပဲ....
​ကျွန်​တော်​နား​လည်​တာ​က ​ခေါင်း​စဉ်​က ​အ​သုံး​ပြု​ပုံ​ကို ​ရည်​ညွှန်း​တာ​လို့ ​ယူ​ဆ​မိ​ပါ​တယ်... ​နိ​ဒါန်း​က​လည်း ​အ​သုံး​ပြု​ပုံ​ကို ​ရည်​ညွှန်း​တာ​ပါ​ပဲ..... ​ဒါ​ပေ​မယ့် ​အောက်​က ​စာ​သား​တွေ​က​တော့ ​ဘယ်​နေ​ရာ​မှာ orbit downloader software ​ကို ​ဒေါင်း​လုပ် ​လုပ်​နည်း​နဲ့ install ​လုပ်​နည်း​တွေ​ကို ​ဖော်​ပြ​ထား​တာ​တွေ့​ရ​ပါ​တယ်...
​ကျွန်​တော်​က ​ဘယ်​လို ​အ​သုံး​ပြု​ရ​မယ်​ဆို​တာ ​သိ​ချင်​လို့ ​ခေါင်း​စဉ်​ကြည့်​ပြီး ​ဝင်​ဖတ်​သူ​တစ်​ယောက်​ပါ...
​အဲ​ဒီ​လို ​အ​မှတ်​တ​မဲ့​လွဲ​ချော်​တတ်​တာ​လေး​တွေ​ကို ​ဂ​ရု​ပြု​စေ​ချင်​ပါ​တယ်...
​မ​သုံး​တော့ September 22, 2010 at 9:14 AM
​ဒီ post ​ကို​တွေ့​တော့​မှ​ပဲ ​အ​ဆင်​ပြေ​သွား​တော့​တယ်။​မ​နေ့​က ​တစ်​ည​လုံး​လုပ်​ကြည့်​နေ​တာ။​အ​ဆင်​မ​ပြေ​ဖူး..​ခု​တော့​အ​ဆင်​ပြေ​သွား​ပီ။ ​ဘု​ရား​တောင်​မှ ​မာန်​နတ်​ဆို​တာ​ရှိ​သေး​တာ​ပဲ ​အ​နှောက်​အ​ယှက် ​မ​နာ​လို​သူ​ဆို​တာ ​က​တော့ ​ပြော​စ​ရာ​တောင်​မ​လို​ဖူး​ထင်​တယ်​နော်။​အား​လုံး​က​တော့ ​ကို​ညီ​နေ​မင်း ​ကို​အ​မြဲ​တမ်း​ကျေး​ဇူး​တင်​နေ​မှာ​ပါ။
​မှတ်​ချက် (​ယုက်​မာ ​သူ​များ​မ​ပါ)
summer December 23, 2011 at 11:21 AM
​ခု​လို ​သိ​တာ​လေး​တွေ ​မျှေ​ဝ​ပေး​တာ ​ကျေး​ဇူး​ပါ
SAITHURA January 27, 2012 at 5:26 AM
mon lay March 4, 2012 at 3:39 AM
​ကျ​နော်​လဲ ...add-on ​ကို​ထည့်​ဖို့​လုပ်​တာ.page not found ​လို့​ပေါ်​နေ​တယ်..​ဘယ်​လို​လုပ်​ရ​မ​လဲ
Dial up connection ​ဖြင့် ​အင်​တာ​နက်​သုံး​သူ​များ...
Orbit Downloader ​ကို ​ဘယ်​လို ​အ​သုံး​ပြု​ရ​လဲ ??...
​မ​သိ​စေ​ချင်​တဲ့ Folder ​များ​ကို ​ဖွက်​ထား​ချင် ...
RAR file ​တွေ Corrupted ​ဖြစ်​လျှင်​ဖြင့်